Hanbalyo dhalinyarada kunool casimada gobolka sarar ee caynabo.
Tuesday October 13, 2020 - 09:01:25 in Maqaallo by Wariye Tiriko
Asalaama aliukum waramtuAllah dhaman akhriyasha sharafta leh e ku xidhan mareegta burco online. waxad modaa in ay inagu badan yihin dhinaca warxumada iyo dhaliisha iyo warka dhilada waxad moda in dadku badana xisiyan balse manta waxan raba inan u mahad cesho dhalinyaada kunool gobolka sarar o dhan gaar ahaan kuwa kunool magalada caynabo, dhalinyaadu wa jiilka u hadhi dona mustaqbal wadankena waana ubaxi dalka balse manta waxad moda in jilkii ubaxa dhalinyarada somaliland ama somaliyeed ba ay samaysay xanuun kii qabyalada o an aminsahay in aan xanun ka weyni jirinba.
dhalinyarada gobolka waxan ku hanbelyeynaya dedaalka gusha iyo hawl karnimada iyo halaburka ay la yimaden dhalinta gobolka sarar.
waxay ila muqataa inay ka xarobeen qabyaladi qadhmunka ahayd ee mawjadaha iyo maskaxda ka dashatay umada somaliyed o idil.
Dhalinyarada somaliland waxan leyhay haku daydaan dhalinyarada gobolka saraar o haka xaroban qabyalada iyo qobqobka reeraha.
Dhalinyarada reer caynabo waxay hirgeliyen barnaamijka iftimi magalaada, waxay kalo hirgalayen ama tixracen inay ku dhiradaan dhaaam biyood magadalada cayanbo hada ka hirgalay. Waxay kaloo hirgalayen dhir beeris, waxay kaloo iyago isku duuban ay hirgasheen barnaamijka wacyigelin ah o fekerkada xun loga bedelayo qabyalada iyo mukhaadaradka iyagoo meel kale an ka helayn caawimo.
Dhalinyarada reer caynabo waxan leyahy hadaanu nahay qurbajoga gobolka sarar wanu ku dirsanay hawshaa aa wadan, ee gulaystayaoow gediga wada.
Guuul iyo gobanimo somaliland.